Maxaa dib loogu dhigay muxaadaradii Sheekh Umal ee Muqdisho? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Sheekh Maxamed Cabdi Umal
Image caption Sheekh Umal
Waxaa si lama filaan ah dib loogu dhigay muxaadaro uu Sheekh Maxamed Cabdi Umal ku qaban rabay magaalada Muqdisho, sababtuna kuma saabsana muran shalay Khamiistii hareeyay arrimha la xiriira muxaadaradaas.
"Jaanasada walaasheen Almaas Elman Alle ha u naxariistee waxaa lagula tukan doonaa Masjidka Isbahaysiga salaadda Jimcaha keddib. Khudbada waxaa maanta ku qoran Sheekh Maxamed Cabdi Umal, isaga ayaana Janaazada hoggaamin doona Insha Allaah", sidaas waxaa bartiisa Facebook kusoo qoray Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed.
Sheekh Soomoow ayaa shacabka Soomaalida ka dalbaday inaysan ka qeyb galin muxaadarada Sheekh Umal, isagoo ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay waxa uu ugu yeeray 'musiibada ugu weyn ee ka jirta dalka'.
"Hadalka ka soo yeeray Sheekh Soomoow ma ahan mid uu ku matalayo culimada ee waa kalmad ra'yigiisa ah, haddii Sheekha uu wax tabanayo ama su'aal uu qabo waxay ahayd in uu culimada Soomaaliyeed la soo xiriira, Sheekha in uu ku degdego arrin noocaas ah ma ahayn", ayuu yiri Sheekh Bashiir oo ah Guddoomiyaha Hey'adda culimada Soomaaliyeed.
Image caption Sheekh Cali Wajis
"Hadalada Sheekh Soomoow uu ka sheegay Sheekh Umal waxay dhaawacayaan wixii Sheekh Umal uu ka mudnaa Soomow iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gargaarkii uu Sheekh Umal u fidiyay dadka Soomaaliyeed, Sheekhaa waxaa uu keenay 330 kun oo doolar oo uu soo uruuriyay dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan, Sheekh Soomow na waxaa uu meel uga dhacay dhaqanka Soomaalida", ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis.